Ithuluzi lama-Webinar lamahhala kanye nePulatifomu Ebukhoma yokusakaza | KULULA
Ithuluzi le-webinar lamahhala
Bamba indawo yokusebenzela ebukhoma futhi wenze imali ngokubuka ngakunye. Thumela okuqukethwe kwegciwane futhi wakhe ababukeli bakho.
U LIVE yindawokazi yokusakaza ebukhoma ebukhoma yama-webinars nemibukiso exhumanayo. Iya bukhoma, yabelana ngokuqukethwe okuhle futhi uthole imali ngokubuka ngakunye futhi uma othile ebeka amazwana kokuthunyelwe kwakho.
Thola okuningi njengoba uhola
Azikho izimali ezisetshenziswayo o njengomenzi wokuqukethwe. Asabelani ngengeniso yakho namaqembu wesithathu.
Uhlelo lokusebenza lusebenza kuwo wonke amadivayisi: ama-desktops, ama-laptops, amaphilisi kanye nama-Smartphones. Finyelela izithameli zakho ezihlosiwe ngempumelelo!
Abasebenzisi abasebenza njalo ngenyanga
Ukukhula kwezithameli ngenyanga
Isilinganiso semali engenayo yanyanga zonke ekubukweni kokuqukethwe
Thola imali engenayo engu-100% ngokubhaliselwe ngakunye
Ukubhalisa kuyindlela yokusekela umbhali nokuthola ukufinyelela kokushicilelwe okukhethekile nemifudlana.
Lapho umsebenzisi eqinisekisa okubhalisele okukhokhelwayo, wenza inkokhelo engaguquki yanyanga zonke. Uhlelo lokubhaliselwe okukhokhelwayo alufaki amakhomishini, ngakho-ke uthola i-100% kusuka kwisamba sokubhalisile.
Kungani lokhu kuzuzisa ababhali?
Izinkokhelo eziyi-100% ngaphandle kwamakhomishini
Izinkokhelo ezifika ku- $ 40 ngenyanga kusuka kokubhaliselwe okukodwa
Ukuhlelwa kwezinga eliguquguqukayo
Kungani lokhu kwanelisa ababhali?
Ibhonasi: izingxoxo nomhumushi ozenzakalelayo
Ibhonasi: ukubhalisa okusheshayo ngokuchofoza okuningana
Izindlela ezingaphezu kuka-10 zokukhokha (kuya ngezwe lakho)
Okuqukethwe kwekhwalithi ye-HD
Yabelana ngokuthile okuhle nomhlaba bese ukhokha ngakho
Qala ngokwakha izithameli zakho. Shicilela okuqukethwe kwamahhala nokuwusizo kuqala ukuze uthandwe futhi wandise ukubukwa. Hlangana nezithameli zakho. Iya bukhoma ukukhuthaza okuqukethwe kwakho futhi uthole imali!
Ngemuva kokwakha izilaleli ezithile ezithembekile zama ukuthumela okuthile okubaluleke kakhulu kubo. Kwenze kukhokhelwe ukwandisa imali oyitholayo noma yabelane ngayo mahhala uma izithameli zikhulu ngokwanele.
Ukusakaza bukhoma okuyimfihlo
Iya bukhoma futhi wenze ukusakazwa kwakho kube yimfihlo ukuze wabelane ngemininingwane ebalulekile. Khokhela yonke iminithi yokusakaza.
Khokha umsakazo ngamunye wokubuka
Uyakwazi ukwenza imali engenayo ngokuqukethwe okubalulekile. Wonke amavidiyo nezithombe zikulethela imali ngaso sonke isikhathi lapho zibukwa.
Ungakhetha eyodwa kokusethiwe bese wenze ngokufanele ngesikhathi sokusakazwa bukhoma. Zonke izinto ezisethiwe zinezenzo ezimbalwa ezihlukile okufanele uzenze.
Abasebenzisi bavame ukubonga kakhulu abaqondisi ngokuthumela kubo imali.
Asidingi noma sabelana ngemininingwane yakho yomuntu siqu namaqembu wesithathu. Vele ukhombise ukuthi usuvele uneminyaka engu-18 ukuqala ukuhola nathi.
Vimbela amazwe athile nezifunda ukuvimbela ukunaka okungafuneki.
Sebenzisa i-VISA, i-Mastercard, i-Paypal, i-Payoneer, i-Yandex, i-QIWI, i-SEPA, izinsiza ze-Bitsafe noma uthole i-invoyisi yokukhipha imali.
Yabelana ngokuqukethwe okuhle nomhlaba
I-U LIVE isekela izilimi eziyi-12 kuze kube manje (izilimi eziningi ezesekelwa). Uhlelo lokusebenza lusetshenziswa emazweni angama-251.
IsiNgisi, isiJalimane, isiFulentshi, iSpain, isiCzech, isiRussia, isiTurkey, isiJalimane, isiHeberu, isi-Arabhu, isiNtaliyane nesiDashi.
Konke okuqukethwe okubhaliwe okwenziwa nguwe nabasebenzisi bakho kuhunyushwa ngokuzenzakalelayo. Ungaxhumana kalula nabasebenzisi ngaphandle kokwazi olunye ulimi.
Qala ukusakaza kwakho kokuqala bukhoma manje, kulula!
Bhalisa njengomphathi - kulula!
Qalisa ama-workshops wamahhala kanye namakilasi we-master ukwakha izithameli zakho
Shicilela okuqukethwe okubalulekile bese uxhumana nezithameli zakho
Imigomo Yokusebenzisa Inqubomgomo yobumfihlo Ukuxhaswa Thola ku-webinars Yiba Yi-Affiliate Ingxoxo ye-roulette ehlukile Affiliate agreement Creator agreement
Isiphequluli iOS Android Huawei App Gallery
Русский Español עברית 日本語
Français České Deutsch